Ny 'fianakaviana matoatoa' PsyOp (fandidiana ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra 'fisainana polisy' eritreritra: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 Oktobra 2019	• 9 Comments
Ny 'fianakavian'ny matoatoa' avy amin'ny tantaran'i Ruinerwold dia mety hamonjy vola Telegraaf be dia be raha amidy ny 'subvention premium' aminy. Saingy, raha manokatra ity takelaka 'havana' amin'ny Google Chrome Incognito ity ianao dia afaka mamaky tsy voaloa. Maninona miditra amin'ny gazety iray izay efa nanohana ny fitondran'ny Nazia tamin'ny "40 /" 45 ary mbola mitaona ny toe-tsain'ny olona ankehitriny? Ny tsy tsapan'ny maro dia ny hoe ny haino aman-jery sy ny politika dia azo ampiasaina hanosehana ny lalàna izay misy fiantraikany amin'ny olon-drehetra amin'ny alàlan'ny fandidiana ara-tsaina (PsyOps). Na izany na tsy izany dia afaka manontany tena amin'ny tenanao hoe maninona ny fanjakana no afaka manafoana (fampidirana am-ponja) olona ao amin'ny fahafahany izay, toa izao dia toa tsy nanao na inona na inona diso mivaingana.
Nisy vono olona natao tany Ruinerwold ve? Nahita ny razana teny amin'ny saha ve? Misy AK47 ve any anaty lakaly? Tsy misy izany! Iray ny tantara iray an'ny ankizilahy iray tao amin'ny pub ary ny ambiny kosa fotsiny tombantombana. Ahoana no ahafahanao mamorona korontana be dia be manodidina ny olona vitsivitsy miaraka amin'ny zaridaina homena, izay ny tantarany hatramin'ny andro 1 dia mifototra amin'ny vinavina ary tsy mbola fantatra ny heloka bevava mivaingana.
Zazalahy 25 iray taona dia misotro labiera vitsivitsy ao amin'ny pub ary heverina fa mangataka fanampiana. Fanampiana ho an'ny inona? Mba entin'ny lehilahy babo ve izy? Ahoana ny fomba handehanany any amin'ny pub rehetra? Ary inona no mahazo an'ity lehilahy ity? Ny tiako holazaina: noho izany dia mamadika ny firenena Holandy manontolo ianao miaraka amina tantara momba ny olona mety manana fiainana saro-kenatra kely ary zaridaina fampidirana an-kolaka, fa raha ny marina dia manantena famadihana toy izany ianao amin'ny famonoana andian-dahatsoratra na amin'ny tantara toy ny an'i Marc Dutroux izay tena mahaliana ny ankizy. mihidy ao anaty lakaly ambany. Ny fanafintohinana Robert M. fanararaotana ao amin'ny ivon-toeran'i Amsterdam dia somary kely kokoa ny lohateny raha oharina amin'ity tantara ity. Raha maheno ny mpitatitra miteny fa tsy izany dia tsy "mbola tsy fantatsika","mbola eo am-pikarohana azy isika"Ary"toa misy fiandrasana fotoana farany","ny ray dia mety efa mpikambana tao amin'ny sekta Moon nandritra ny fotoana kelikely". Izy ireo ihany no milalao amin'ny fahatsapana an-tsinay fotsiny, fa raha mandinika izany tsikelikely ianao, dia ho hitanao fa misy ny fahalalahana fototra lehibe eo amin'ny sakana.
Tsy sarotra ny mametraka PsyOp mandritra ny taona fiomanana. Azo antoka fa raha mampiasa toerana misy ambany ny haben'ny mponina. Raha te hampihatra fanovana lalàna izay misy fiantraikany amin'ny olona 17 tapitrisa ianao ary mety hametraka ny fototry ny lalàna vaovao an'ny EU izay misy fiantraikany amin'ny olona 500 tapitrisa, mety hisy vidiny vitsivitsy ny vola ary te hanao asa fanomanana feno sy izay ataon'ny olona ianao. marimaritra iraisana. Ankoatr'izay, manana ANPs John de Mol miaraka amin'ny studio sy ny safidiny isika deepfakes mba hamoaka vaovao sandoka.
Amin'ny alàlan'ny votoatiny karama, izay ahitana an'i De Telegraaf toa fisokosoka olona marobe, azontsika jerena ao amin'ny endrika Incognito fa misy iraka mazava ao ambadik'ity tantara ity. Raha ny marina, misy fanodikodinana goavana izay misy ireto toetoetra manaraka ireto:
ny olona maniry ny legioma avy aminy dia mety ho sekta
ny lehilahy misy volombava sy ny volo lava dia mety hampidi-doza (ohatra, Martin Vrijland)
Ny olona tsy te hanaraka ny lalàm-panjakana dia tandindomin-doza ho an'ny tenany sy ny tontolo iainany
Ny olona manakiana dia sectarian ary manidy zaza
Ny ankamaroan'ny PsyOps dia misy takelaka marobe, saingy mazava kosa fa loko manintona ny fomba fijerin'ny olona io. Toa tsy maintsy miomana amin'ny fanaovana lalàna ny vahoaka izay hahafahan'ny fanjakana hijery eny ambadiky ny varavarana rehetra.
Toy izao ny soratra mila mamaky ianao raha lasa mpikambana ao amin'io gazety io ianao manana laza laza tsara:
Niaiky i Joritary fa manana hevitra tsy mitovy izy ireo. Nifankahita tamin'ny fianankaviana manokana ny fianakaviana Australiana sy ny Holandey. "Tany amin'i Etazonia i Josef ary nahita ny fomba nifehy ny famokarana varimbazaha ny orinasa iray. Nihevitra izy fa tsy mety izany. Tsy nila namaritra ny zavatra nihinana na nisotro ny olona. Namboarina voajanahary araka ny tokony ho izy, ny grain. Tsy te hihinana an'izany izy. ”
"Tiany mikarakara ny tenany sy ny sakafony ihany koa izy satria noheveriny fa mety hisy vokatra simika ao aminy. Izy ihany no nisotro rano menaka. Nisy poizina avy amin'ny indostrian'ny rivotra koa. Nino izy ireo fa misy governemanta tarihan'ny hery iray ao aoriany. Nilaza izy fa tsy misy dikany ny mifidy. Tamin'ny farany dia tsy nino hatramin'ny farany. Saingy te hiaro ny tontolony izy ka tsy mila olona. Te hanao izay hahavoky ny tenany ilay toeram-pambolena. "
Hanombohana dia tsy hevitra misaraka ireo. Manatri-maso ny fandrosoan'ny Neuro Linguistic Programming (NLP) an'ny vahoaka izahay. Manomboka izao ny haino aman-jery sy ny politika dia hamaritra izayhevitra misaraka'Ve. Ireo no tena dingana voalohany mankany George Orwell's nieritreritra polisy. Manomboka izao, ny fanjakana (amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao fampielezana azy) no hamaritra izay azonao atao ary tsy azonao eritreretina. Hatramin'ny oviana ianao no tsy mahita fa ny orinasa iray dia mifehy ny famokarana varimbazaha ary i Monsanto (ankehitriny Bayer) dia mamolavola ara-dalàna ny voly? Hatramin'ny oviana mahamenatra ny manondraka ny legioma tianao sy manadio rano? Eny, azo antoka fa manomboka izao! PsyOps no manompo an'ity tanjona ity. Ny vahoaka dia voalamina betsaka. Izy io dia NLP ny haben'ny mega ary ny milina fampielezan-kevitra amin'ny haino aman-jery manontolo anisan'izany ny «manam-pahaizana» fanta-daza sy ny mpanao politika tezitra no alefa indray.
Namboarina miaraka amin'ilay sary ny olona izay olona mieritreritra fa manakiana mafy dia mety ho adala sy sekta. Raha ny marina, ny lalao dia atao eto amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo karazan-tsikera rehetra amin'ny 'sectarian' stigma ary misy olona mandroba ny fahafahany.
Tonga ny fotoana hifoka sigara amin'ny haino aman-jery mahazatra mpanao propagandy PsyOp sy ny mpanao politika ao anaty lavaka! Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny famonoana ny fahalalahanao fototra amin'ny alalàn'ny lalao stigma sy ny programa amin'ny fitaka. Vakio here the sequel.
Tags: 25, misaraka, fotoana farany, nieritreritra polisy, family, hevitra, taona, sarony, heloka bevava, Moon, vaovao diso, hevitra, Premium, Ruinerwold, sekta, hampahatahotra, fianakaviana matoatoa, Telegraph, Väder, zanak'i
18 Oktobra 2019 ao amin'ny 08: 29
Tena marina ilay izy mba hamaritana!
Nanjary tantara iraisam-pirenena io tantara io. Fa tsikaritro fa maro ny olona mahita izany tantara tsy fahita firy io fa aza miditra lalina ao.
Tohizo hatrany i Martin, lehibe ny fiatraikany ary mihalehibe. Tsy lainga intsony ny lainga, mandresy hatrany ny marina.
18 Oktobra 2019 ao amin'ny 09: 56
Ny tena mahagaga ahy dia ny fahitan'ny olona ny zava-mitranga ary aza misalasala mizara lahatsoratra toy izao na hampitandrina ny tontolo iainany .. "noho ny tahotra ny holavina". Inona no tena matotra ankehitriny? Tontolo iainana iray noho ny tsy fahatakarana satria nanakimpy ny masony ilay fampahalalam-baovao na fandrahonana tsy fanarahana azy?
18 Oktobra 2019 ao amin'ny 20: 23
Misy ifandraisany amin'ny fampivelarana ny maha-olona ambony anao kokoa. Raha tsapanao ny fomba fiasan'ity tontolo ity, dia tsy mampaninona anao ny holavina. Ankoatr'izay, miankina amin'ny ny fomba hitondranao azy sy ny fahatsapany ilay mpandray izany ihany koa. Betsaka ny olona mamaky sy mahita ny zava-drehetra fa tsy miditra satria manonofy izy ireo.
Ny fanamby lehibe indrindra dia ny manao zavatra isan'andro isan'andro ary tsy ny hisambotra ny taratasy maraina sy ny fombafomba mahazatra amin'ny mpanamory fiaramanidina mandeha ho azy.
Rehefa tapaka io dia mandeha haingana miaraka amin'ny fampandrosoana ny avatar ataontsika.
18 Oktobra 2019 ao amin'ny 10: 37
Nankany an-trano ny polisy 1x tany am-boalohany ny polisy satria nihevitra izy ireo fa mety misy fambolena hemp, saingy tsy navelan’ilay rangahy. (Hoy ny "mpitondra tenin'ny polisy" tamin'ny fandresena an'i Jeroen Pauw).
Mazava fa ny teboka dia ny fanesorana izany tokonam-baravarana izany: Olana, Fihetseham-po, Vahaolana ... fanafihana
20 Oktobra 2019 ao amin'ny 00: 31
Ao anatin'izany fandaharana ara-tsaina izany (NPO) ao amin'ny Pauw manaitra feo, izay ahafahan'ny pasitera mamoaka feo maneso kokoa noho ny
ny fanahin'ny atidoha (ny mpijery TV).
Tamin'iny minitra 21, 19 ny fanadinana lakana (noheverina) dia nifarana niaraka tamin'i Sjoukje Drenths- Bruinsma izay nitadidy ny lahatsoratra nataony: "Ny teknika fanaraha-maso mpanimba dia teo amin'ny toerany, atidoha izany"
Ary voalaza eo amin'ny orinasam-pahefana fanaraha-maso lehibe indrindra ao amin'ny NL, Pauw fa ho menatra ny tenanao ianao
izay olona rehetra milalao ao, manao ahoana ny halavanao afaka mandeha, Richard Groenendijk izay mitazona ny afo avo koa amin'ny alàlan'ny fangatahana an-tsofina (nianatra) avy amin'ny fihetseham-po sandoka.
Fampisehoana fampisehoana teatra mba hahitana ny NLérs hitodika mankany amin'ny làlan-kizorana manokana amin'ny masobe.
Richard groenendijk ilay mpilalao izay tia manome vola amin'ny famitahan'ny vahoaka,
Endrik'anarana manana tanjona tsara eritreritra ary miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena faobe.
Andao hisaotra ilay mpitoraka bilaogy noho ny fanombanana ny fahitana, fa raha tsy izany dia handoka fotsiny ihany ianao, ilay fisolokiana mamboly sandoka ao Drente.
18 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 33
Toy ny tarika Welsh taloha nihira
Raha milefitrao ity zanakao ity ho avy eo ..
18 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 48
“Eny, fa toa i Jeroen Pauw amiko dia lehilahy mamy tena azo itokisana toy izany; tsy mandainga izy Ny olona toy izany dia tsy milalao teatra, sa? Ary tsy vahiny avokoa ireo mpitsangantsangana ireo? "
Iza no mandoa no mamaritra.
18 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 07
Mifankatia i De Mol sy Pauw ary ny voalohany mipetraka miaraka aminy eo amin'ny latabatra. Tadidiko fa ny fanerena avy amin'ny Mpanjakavavy dia heno foana hatrany amin'ny lohalaharana amin'ny fampisehoana. Tsy hainao raha mbola izany no izy, nefa misy dikany izany ..
saika antsasaky ny tapitrisa tapitrisa ny fahaverezan'ny 2013. Angamba mifandraika amin'ny fahalianany mihoatra ny 25 isan-jatony ao amin'ny TVBV, orinasa mpamokatra izay misy Endemol ny 71 isan-jato. Nihena ny sandry ny orinasany Pief Paf Pauw amin'ny € 4,1 tapitrisa ka € 2,6 tapitrisa
Any am-paosin'i De Mol (Talpa) izy
19 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 53
Ary mombamomba an'ity tovolahy ity. Mitsangàna 'zava-misy vitsivitsy', toy ny daty nahaterahany sy ny daty famindrana, mba hampahatsiahivana azy. Zavatra maro no navoaka nefa ny tsikera fotsiny avy amin'ny olona izay mijery ny mombamomba azy satria ao amin'ny vaovao. Voalaza fa ny sary nalaina tany amerikana dia sary tany Amerika. Tsy fantatra mazava hoe taiza no mety ho nanaovana azy ary iza no nanamboarana azy.
« Fihetsiketsehana ho an'ny tantsaha: mandinika fa tsy mpiasam-panjakana ny mpitondra ataonao
Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 2) »
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? op Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
guppy op Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany
Zandi Eyes op Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany